platforms - Synonyms of platforms | Antonyms of platforms | Definition of platforms | Example of platforms | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for platforms
Top 30 analogous words or synonyms for platforms
MySQL MySQL ဟာ platforms အမျိုးမျိုးပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Platforms တွေကတော့ AIX, BSDI, FreeBSD, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OS/2 Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Windows 95, Windows 98, Window ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP and Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရောက်ဆာ စစ်ပွဲများ ၁၉၉၂ ကုန်ခါနီးတွင် အခြားသော browsers များလည်း ပေါ်ထွက်လာကြသည်။ ၎င်းတို့မှ အများစုမှာ libwww library ပေါ်တွင် အခြခံထားကြသည်။ ထို browser များတွင် Unix browser များဖြစ်ကြသည့် Line Mode Browser, ViolaWWW, Erwise, နှင့် MidasWWW ၊ Mac browser များဖြစ်ကြသည့် MacWWW/Samba တို့ပါဝင်သည်။ ထို browser များသည် ရိုးရိုး HTML viewers ဖြစ်ကြသော်လည်း ပြင်ပ applications များ၏ အကူအညီဖြင့် multimedia content များကို ကြည့်ရှုရန် မှီခိုနေရသည်။ အသုံးပြုသူများကို browsers နှင့် platforms နှစ်ခုစလုံးကိုပါ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားသည်။
Cross platform Cross-platform သို့မဟုတ် multi-platform သည် computer porgrams များသည် မည်သည့် operating systems တွင်မဆို မည်သည့် computer languages တွင်မဆို မည်သည့် programming languages တွင်မဆို သို့မဟုတ် multiple computer platfrom တွင် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ croo-platform application သည် Micrsoft Windows တွင် x86 architecture တွင်သာမက Linux x86 architecture နှင့် Mac OS X PowerPC based Apple ဒါမှမဟုတ် x86 Apple Macintosh system များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Cross-platform application များသည် တစ်ခုထက်ပိုသော common platforms များတွင် run နိုင်ရမည်။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ယနေ့ခေတ်အချိန်တွင် အသုံးပြုနေကြသော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများမှာ Near Field Communications (NFC)၊ Bluetooth ၊ DECT၊ mobile phones ၊ Wi-Fi ၊ WiMAX ၊ High Altitude Platforms နှင့် satellite telephone networks စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိလေသည်။ တစ်မျိုးစီသည် သတ်မှတ်ထားသောဈေးကွက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားသည်။ တိုးတက်ခေတ်မီလာသော ခေတ်ကာလတွင် လူသားတိုင်း၏ လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို ပြည့်မီနိုင်ရန်အတွက် တစ်မျိုးတည်းသောနည်းပညာဖြင့် မလုံလောက်နိုင်ပေ။ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး အသင့်လျော်ဆုံးသော နည်းပညာများကို ပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်အောင်မြင်မှုများ ရရှိပေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလျှင် Bluetooth က ကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကို အစားထိုးပစ်လိုက်နိုင်သော်လည်း အဖိုးနှုန်းပမာဏမှာ များလှသည်။ အဖိုးနှုန်းများသည့်အပြင် တိုတောင်းသည့် အကွာအဝေးနေရာကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး data rate ဒေတာပို့နှုန်းမှာလည်း အသင့်အတင့်သာ ရှိသည်။ ဂြိုဟ်တုစံနစ် satellite systemသည် တပ်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ် များသော်လည်း ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသောအကွာအဝေးအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းပညာဖြစ်သည်။
ဗော့စတော့ ၁ Prime Minister Jawaharlal Nehru of India praised the Soviets for "a great victory of man over the forces of nature" and urged that it be "considered asavictory for peace." "The Economist" voiced worries that orbital platforms might be used for surprise nuclear attacks. The "Svenska Dagbladet" in Sweden chided "free countries" for "splitting up and frittering away" their resources, while West Germany's "Die Welt" argued that America had the resources to have sentaman into space first but was beaten by Soviet purposefulness. Japan's "Yomiuri Shimbun" urged "that both the United States and the Soviet Union should use their new knowledge and techniques for the good of mankind," and Egypt's "Akhbar El Yom" likewise expressed hopes that the cold war would "turn intoapeaceful race in infinite space" and turn away from armed conflicts such as the Laotian Civil War.